1. Hubi in ilmahaagu rabo inuu barafka barafka ku dul dhaco
Waalidiinta qaarkood waxay ku riyoodaan in ilmahoodu maalin uun ku guulaysto bilad dahab ah ciyaaraha Olombikada Jiilaalka, sidaas darteed waxay ku talo jiraan inay u diraan jiirka isla marka uu barto socodka. Kuwo kale waxay qorsheeyaan inay ku koraan qof isku maan ah iyo lammaane si wadajir ah uga soo baxaan waddooyinka cas (ama xitaa madow). Waxa kale oo jira kuwa raba in wiilkooda ama gabadhooda ay bartaan sida saxda ah ee loo kaxeeyo oo ammaan ah oo ay waqti fiican ku qaataan jiirka. Waa muhiim in ilmuhu la wadaago rabitaankan oo uu xiiseeyo barafka.
2. Sug da'da saxda ah
Waxaad bilaabi kartaa skiing laga bilaabo 3-4 jir, iyo barafka laga bilaabo 7 jir. Waxaa habboon in la doorto macalin iyo barnaamij cashar iyadoo la tixgalinayo yoolka waxbarasho iyo da'da ubadka. Horyaallada mustaqbalka waxay u baahan yihiin qaybo isboorti oo kaa caawin doona in ay dhammaystiraan farsamada aasaasiga ah oo ay ku dhiirigeliyaan inay hore u socdaan; loogu talagalay hiwaayadda, barayaasha carruurta ee yaqaan sida loo soo jiito ilmaha.
3. Hubi aqoonta iyo khibradda macalinka
Sawirka: Rosa Khutor
Si carruurtu ay fasallada u aadaan iyagoo faraxsan oo ay gaadhaan yoolalkooda, ma aha oo kaliya guulaha ciyaaraha ee macallinka, laakiin sidoo kale aqoontiisa dhinaca cilmi-nafsiga carruurta iyo physiology iyo, dabcan, khibrad baridda. Orodyahan kasta oo noqday xiddig ma yaqaan sida loo gudbiyo macluumaadka ardayga.
Ka hor inta aan la bilaabin xiisadaha, waxaa habboon in la ogaado inta uu macalinku wax baraya carruurta. Waa muhiim in la fahmo koorasyada uu qaatay, shahaadooyinka uu haysto, haddii uu soo gudbin karo dukumeenti arrintan ku saabsan. Waxa kale oo lagugula talinayaa inaad ka raadiso internetka dib u eegista macalinka, tani waxay kaa caawin doontaa inaad fahamto in adiga iyo cunugga aad awoodid inaad xiriir la sameysataan takhasusle.
Waa xikmad iyo faa'iido badan in la aado dugsiyada rasmiga ah ee barafka halkii aad ka tagi lahayd macalimiinta gaarka ah. Dugsiyadu waxay qiimeeyaan sumcaddooda, sidaa darteed waxay si taxadar leh u eegaan shahaadooyinka takhasuska iyo shahaadadooda, waxay qabtaan tababaro, waxayna la socdaan tallaabooyinka amniga.
Si badbaado leh loo fuulo, waxa fiican in isla markiiba lala shaqeeyo macalinka saxda ah kaas oo bixin doona farsamada. Isku dayga lagu badbaadinayo lacagta waxay horseedi kartaa xaqiiqda ah in hadhow ilmuhu uu dib u baran doono.
4. Raadi macluumaadka ku saabsan dugsiga
Goobaha barafka ee waaweyn ayaa inta badan leh dhowr dugsi oo isku mar ah. Soo hel faallooyin ku saabsan mid kasta oo iyaga ka mid ah, oo ah shay ay waajib tahay in loo diyaariyo skiing-ka.
U fiirso ma aha oo kaliya waxa ay ku qoraan macalimiinta, laakiin sidoo kale macluumaadka ku saabsan dugsiga oo dhan: meesha uu ku yaal, waxa saxda ah ee lagu daro kharashka casharka, waxaa jira qolka ciyaarta. Waxaas oo dhan ayaa go'aaminaya heerka waxbarashada, raaxada carruurta iyo waalidiinta.
Aad bay u wanaagsan tahay marka carruurtu wax ku bartaan jiirada kala duwan, kuwaas oo ku qalabaysan rooga sixirka, ama socotada, tani waa suunka qaadaha kaas oo caawin doona skier yar inuu gaaro meesha ugu sareysa ee jiirada tababarka. Waxa kale oo ay ku habboon tahay waalidiinta marka qalabka lagu daro kharashka barnaamijka tababarka.
Oo waa kan sida loo ogaado dugsi aan aad u wanaagsanayn:
Macalimiintu ma haystaan ​​aqoonsiyo.
Dugsigu ma heli karo jiir si gaar ah u qalabaysan oo loogu talagalay fasallada carruurta leh.
Ardaydu waxay u baahan yihiin inay saf u galaan baabuurta fiilada.
Tababar kooxeed, siddeed ama in ka badan ayaa lagu meeleeyay hal macalin.
Dib u eegista dugsiga ee intarneedka ayaa ah badiyaa diidmo, ama midnaba.
Qiimaha hooseeya ayaa lagu tilmaamay inay tahay faa'iido weyn.
5. Dooro qaabka fasalka ku habboon ilmaha
Carruur badan ayaa aad u xiiseeya inay koox ahaan wax u bartaan: waxaa jira qayb tartan ah oo ku jira tababarkan. Intaa waxaa dheer, ciyaaraha kooxda firfircoon ee dardargelinta iyo isku dubaridka dhaqdhaqaaqa waxay sameeyaan fasallo madadaalo iyo fudud.
Laakiin qaabkani kuma habboona qof walba. Haddii ilmuhu aanu weli aadin xannaanada oo ay adag tahay in uu waalidkiis kala tago, waxa fiican in uu iska diiwaan geliyo casharrada gaarka ah. Markaa dareenka macalinka ayaa loo jeedin doonaa isaga oo keliya, culeyskana waxaa loo xisaabin doonaa si dabacsanaan leh.
Isla mar ahaantaana, waa inaadan ka dalban horumarka degdega ah ee ilmaha iyo khabiirka, iyo xitaa si ka sii badan si aad uga mashquuliso waxbarashadooda. Marka waalidku aysan ag joogin, carruurta si aad ah ayaa loo ururiyaa oo saaxiibo cusub u fududeeyaa. Faham haddii macalinku ku weydiiyo inaad ka daawato jimicsiga meel fog ama xitaa si gaar ah u aado barafka.
6. Ku bixi fasaxyadaada xerada barafka
Kaamka, ama kaamka barafka, waa hawl joogto ah dhowr maalmood. Waxaa loo qaabayn karaa maalin dhan (tababarida subaxda, qadada, nasashada, jimicsiga fiidkii) ama maalin badhkeed.
Carruurta, xerada barafka waa fursad wanaagsan oo keliya maaha inay bartaan sida loo barafka, laakiin sidoo kale inay saaxiibo samaystaan, la xiriiraan facooda, oo ay helaan dano guud. Halabuurka joogtada ah ee dhowr maalmood wuxuu caawiyaa inuu si fiican u dhexgalo habka tababarka, dareemo raaxo badan, iyo joojinta xishoodka. Qaybta tartanka ku jirtaana waxay soo dedejin doontaa horumarka. Natiijo ahaan, xitaa walxaha adag iyo khiyaamooyinka ayaa la hoos gelin karaa ilmaha, taas oo uu ku heli doono abaalmarino iyo bilado.
7. Tusaale u samee ilmahaaga.
Haddii waalidku door bidaan inay maalmahooda ku qaataan qolka fadhiga oo leh khamri la dubay, dabcan, waxay xaq u leeyihiin inay sidaas sameeyaan. Ugu dambeyntii, qof kastaa wuxuu ku nasanayaa qaabkiisa iyo xawligiisa.
Laakiin way sahlanaan doontaa in la dhiirigaliyo ilmaha haddii waalidku sidoo kale si firfircoon u fuulaan, bartaan, dhacaan oo kacaan, iyo fiidkii, wadaagaan guulaha iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee maalinta. Habkan, qof kastaa hubaal wuu ka faa'iidaysan doonaa.
8. Hel qalab raaxo leh
Badanaa carruurta waxaa lagu duuduubaa jaakado dhumuc weyn leh oo jaakado diirran, waxayna ku kululaadaan jiirarka. Waxaa intaa dheer, dharka noocan oo kale ah ayaa caqabad ku ah dhaqdhaqaaqa, sidaas darteed waxay noqon doontaa mid aad u adag in lagu raaxaysto fuulitaanka oo la barto farsamada saxda ah.
Ku habboon jiirarka, dharka 3-lakabka ah:
Lakabka kowaad waa nigisyada kulaylka leh ee qoyaanka fogeeya. T-shaati-gacmeedka dheer iyo surwaalka hoose waa in laga sameeyaa alaabta synthetic: suufka, dhibcaha uumiga iyo dhididka ayaa la hayaa, sidaas darteed dharka noocan oo kale ah ayaa qaboojiya jidhka.
Lakabka labaad ayaa kululeynaya. Tani waa, tusaale ahaan, jaakad dhogorta leh oo daboolaya, laakiin isla mar ahaantaana neefta. Tani waxay u sahlaysaa qoyaanka lakabka koowaad inuu soo galo dibadda.
Lakabka saddexaad waa difaac. Suudhadhka ski, guud ahaan iyo jaakadaha waxaa laga sameeyaa maro xuubka. Iyada oo loo marayo, qoyaanka ayaa laga saaraa jidhka, laakiin isla markaa maaddadu ma qoyso.
Carruur badan ayaa jecel inay dhex gallaan barafka. Si aysan u buuxin dharkaaga hoostiisa, waa inaad doorataa mid ka mid ah suudadka barafka ee hal-xabbo ah, ama jaakado leh goonooyin gudaha ah oo leh xargaha laastikada. Oo gacmaha iyo lugaha waa in ay jiraan katiinado si adag ugu habboon jidhka.
Koofiyadaha iyo maaskaro sidoo kale waa muhiim. Maskaxdu waxay indhaha ka ilaalisaa qorraxda dhalaalaya iyo barafka. Koofiyaduna waxay kaa badbaadin doontaa dhicid ama isku dhac lama filaan ah. Ugu dambeyntii, waxaad u baahan tahay gacma-gashiyo ama galoofyo aan biyuhu karin oo raaxo leh oo indhahaaga indhaha ku haya si aadan u lumin markaad fuulayso. Labbisku waa inuu ahaadaa cabbir, ma aha mid ka weyn. Markaa waa caadi in la kiraysto.
Xuquuqda daabacaada © 2021 - so.kozmikpanda.com, Waxa aad u baahan tahay inaad ogaato ka hor inta aanad u dirin ilmahaaga dugsiga barafka: 8 talo oo loogu talagalay waalidiinta!